प्रभावी मोबाइल अनुप्रयोग पुश सूचना सage्लग्नताको लागि शीर्ष कारकहरू Martech Zone
गयो समय हो जब महान सामग्री उत्पादन पर्याप्त थियो। सम्पादकीय टोलीहरूले अब उनीहरूको वितरण दक्षताका बारे सोच्नुपर्दछ, र दर्शकहरूको स the्लग्नताले मुख्य समाचारहरू बनाउँछ।
एक मिडिया अनुप्रयोग कसरी प्राप्त गर्न सक्दछ (र राख्न) यसको प्रयोगकर्ताहरू संलग्न? कसरी गर्ने आफ्नो मेट्रिक्स उद्योग औसतसँग तुलना गर्नुहोस्? Pushwoosh १०104 सक्रिय समाचार आउटलेटहरूको पुश सूचना अभियानहरूको विश्लेषण गरिएको छ र तपाईंलाई जवाफ दिनको लागि तयार छ।
सबैभन्दा बढी संलग्न मिडिया अनुप्रयोगहरू के हुन्?
हामीले पुशवुशमा अवलोकन गरेका कुराबाट, पुश सूचना मेट्रिक्सले प्रयोगकर्ता संलग्नतामा मिडिया अनुप्रयोगको सफलतामा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ। हाम्रो हालसालै सूचना बेन्चमार्क अनुसन्धानलाई धकेल्नुहोस् प्रकट भएको छ:
औसत दर-क्लिक दर (CTR) मिडिया अनुप्रयोगहरूको लागि iOS मा 4.43% र Android मा .5.08.०XNUMX% छ
औसत अप्ट-इन दर IOS मा .43.89 70.91%% र Android मा .XNUMX०..XNUMX १% छ
औसत पुश सन्देशको आवृत्ति प्रति दिन p पुश हुन्छ।
हामीले यो पनि भन्यौं कि अधिकतममा, मिडिया अनुप्रयोगहरू प्राप्त गर्न सक्षम छन्:
१२.X एक्स उच्च क्लिक-थोरै दरहरू आईओएसमा र एन्ड्रोइडमा १.13.5.XX उच्च सीटीआरहरू;
१२.X एक्स उच्च अप्ट-इन दरहरू iOS मा र 1.25X Android मा उच्च अप्ट-इन दरहरू।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, मिडिया अनुप्रयोगहरूसँग उच्च प्रयोगकर्ता सment्लग्नता मेट्रिक्ससँग समान धक्का सूचना आवृत्ति हुन्छ: उनीहरू औसतमा झन्डै3पुशहरू पठाउँछन्।
Fac कारकहरू जसले मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोगकर्ता सage्लग्नतालाई प्रभाव पार्दछ
कसरी अग्रणी मिडिया अनुप्रयोगहरू उनीहरूको पाठकहरूलाई संलग्न गराउनको लागि प्राप्त गर्दछन् कि प्रभावकारी रूपमा? यहाँ प्रविधि र सिद्धान्तहरू छन् जुन Pushwoosh अध्ययनले पुष्टि गर्‍यो।
फ्याक्टर १: समाचारको गति पुश सूचनाहरूमा डेलिभर गरियो
तपाईं समाचार भंग गर्न पहिलो बन्न चाहानुहुन्छ - यसले निरपेक्ष अर्थ राख्छ, तर कसरी तपाईं यसलाई यकिन गर्नुहुन्छ?
उच्च-गति प्रयोग गर्नुहोस् पुश सूचना टेक्नोलोजी समाचार सतर्कता औसत एक्स 100X भन्दा चाँडो पुर्‍याउन
हाम्रो अनुभवबाट, जब मिडिया अनुप्रयोगहरूले उनीहरूको पुश सूचना डेलिभरीलाई गति दिन्छन्, तिनीहरूको CTR हरू १२% सम्म पुग्न सक्छ। यो हाम्रो डेटा अध्ययनमा हामीले पत्ता लगाएको औसतमा कम्तिमा दुई पटक हो।
स्ट्रिमलाइन सम्पादकीय प्रक्रिया पुश सूचनाहरू पठाउनका लागि
निश्चित गर्नुहोस् कि पुशहरू मार्फत सामग्री प्रचार गर्नको लागि छिटो र सरल छ कसैले तपाइँको मिडिया अनुप्रयोग टीममा। पुश अधिसूचना सफ्टवेयर छनौट गर्नुहोस् जुन एक मिनेट भित्र खबर वितरण गर्न र लाउड्रेड्सलाई अनुमति दिन्छ - कोड नभए पनि। एक बर्षको क्रममा, यसले तपाइँलाई सात पूर्ण कार्य दिनहरू बचाउन सक्छ!
फ्याक्टर २: पुश सूचनाहरूको लागि अनुकूलन अप्ट-इन प्रोम्ट
यहाँ एक साधारण चाल छ: तपाइँको श्रोतालाई सोध्नुहोस् कुन शीर्षकहरू तिनीहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन् भनेर सोध्नुको सट्टा उनीहरूलाई सूचित गराउन चाहन्छन् कुनै पनि सूचनाहरू सबै मा.
स्थानमा, यसले तपाईंको अनुप्रयोगमा उच्च अप्ट-इन दर सुनिश्चित गर्दछ। अर्को, यसले अधिक दानाकार विभाजन र सटीक लक्ष्यीकरणको लागि अनुमति दिनेछ। तपाईंले प्रचार गरिरहनु भएको सामग्री प्रासंगिक छ कि भनेर तपाईंले अचम्म मान्नुपर्दैन - पाठकहरूले केवल सामग्री प्राप्त गर्न तिनीहरू स्वेच्छाले प्राप्त गर्न पाउनेछन्! नतिजाको रूपमा, तपाईंको सment्लग्नता र अवधारण मेट्रिक्स बढ्नेछ।
तल सीएनएन ब्रेकिंग युएस र विश्व समाचार अनुप्रयोग (बाँयामा) र युएसए टुडे अनुप्रयोग (दाँयामा) मा देखाइएको सदस्यता प्रम्प्टको दुई विशिष्ट उदाहरणहरू छन्।
सावधान रहनुहोस्, यद्यपि: जब तपाइँ बढ्न चाहानुहुन्छaराम्रोसँग खण्डित अप्ट-इन प्रयोगकर्ताहरूको आधारमा, तपाईं सबै तरिकाले तपाईंको पुश सूचना ग्राहकहरूको सूची विस्तार गर्न चाहनुहुन्न।
Pushwoosh डाटा अध्ययनले देखाएको छ कि एक उच्च अप्ट-इन दर तपाइँको संचारको साथ उच्च उपयोगकर्ताको संलग्नताको लागि कुनै ग्यारेन्टी छैन।
टेकवे? विभाजन कुञ्जी हो, त्यसैले यसमा बस्नुहोस्।
फ्याक्टर:: सूचना उपयोगकर्ता विभाजन पुश गर्नुहोस्
उनीहरूको दर्शक संलग्नता अधिकतम बनाउनका लागि अग्रणी मिडिया अनुप्रयोगहरूले उनीहरूका सूचनाहरू उपयोगकर्ता सुविधाहरू (उमेर, देश), सदस्यता प्राथमिकताहरू, विगतका सामग्री उपभोग, र वास्तविक-समय व्यवहार अनुसार लक्षित गर्दछ।
हाम्रो अनुभवमा, यो यो हो कि केही प्रकाशकहरूले आफ्ना CTR हरू 40०% र by०% ले वृद्धि गरे।
फ्याक्टर:: सूचना निजीकरण पुश गर्नुहोस्
विभाजन सहयोग गर्दछ तपाईं तपाइँको पाठकको रुचि पहिचान गर्नुहोस्। निजीकरण, यस बीचमा, मद्दत गर्दछ तपाईका दर्शकहरु अन्य सबै बीच तपाइँको मिडिया अनुप्रयोग पहिचान गर्नुहोस्।
ध्यान पाउनको लागि तपाईंको मिडिया अनुप्रयोगको पुश सूचनाहरूको प्रत्येक तत्वलाई अनुकूलित गर्नुहोस् - शीर्षकबाट ध्वनिमा जुन तपाईंको सन्देश डेलिभरलाई संकेत गर्दछ।
एक धक्का सूचना को तत्वहरू निजीकृत गर्न सकिन्छ
इमोजिस (जब सान्दर्भिक) को साथ भावनात्मक स्पर्श जोड्नुहोस् र प्रयोगकर्ता नामको साथ सुरु गरेर सदस्यता प्रस्तावहरू निजीकृत गर्नुहोस्। यस्तो गतिशील सामग्रीको साथ, तपाईंको पुश सूचनाहरूले CTRs मा १–-–०% बूस्ट प्राप्त गर्न सक्दछ।
निजीकृत पुशको उदाहरण जुन मिडिया अनुप्रयोगहरूले पठाउन सक्छ
फ्याक्टर:: सूचना समय दिनुहोस्
तथ्या .्कका अनुसार हामीले पुशवुशमा जम्मा गरेका थियौं, सब भन्दा बढी CTRs मंगलबार हुन्छ,6र users बिच प्रयोगकर्ताहरूको स्थानीय समयको बीचमा। समस्या यो हो कि मिडिया अनुप्रयोगहरूको लागि यस सटीक समयको लागि तिनीहरूको सबै सूचनाहरूको तालिका बनाउँन असम्भव छ। प्रायः, सम्पादकहरूले उनीहरूको धक्का सतर्कताहरू योजनाको योजना बनाउँदैनन् - समाचार लिने बित्तिकै यो हुनु पर्छ।
केहि मिडिया अनुप्रयोगले के गर्न सक्दछ, यद्यपि, समय पत्ता लगाउँदछ जब यसका प्रयोगकर्ताहरू सूचनाहरूमा क्लिक गर्न र विचारहरू प्रदान गर्न प्रयास गर्दछन् र त्यसपछि लामो पढ्छन्। सफल हुन केहि सुझावहरू:
तपाईंको पाठकको समय क्षेत्र विचार गर्नुहोस्
तदनुसार मौन घण्टा सेट गर्नुहोस्
A / B परीक्षण समय फ्रेम र ढाँचा वितरित
तपाइँको दर्शकलाई सिधा सोध्नुहोस् - स्मार्टन्युज अनुप्रयोग जस्तै नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई सदस्यता प्रम्प्टको साथ सोधेर सोध्नुहोस् जब उनीहरू पुशहरू प्राप्त गर्न रुचाउँछन्।
यो कसरी मिडिया अनुप्रयोगले समस्यालाई समाधान गर्न सक्दछ असाधारण र अनकौंटेड सूचनाहरूको साथ, अप्ट-आउटलाई न्यूनतम पार्नुहोस् र प्रयोगकर्ता संलग्नता अधिकतम गर्नुहोस्।
कारक:: सूचना आवृत्ति धक्का
अधिक एक मीडिया अनुप्रयोग पठाउँदछ पुश, कम CTRs तिनीहरूले प्राप्त - र यसको विपरित: के तपाईं यो कथन सत्य छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ?
पुशवुश डाटा अध्ययनले खुलासा गरेको छ कि पुश अधिसूचना आवृत्ति र CTR एक अर्कामा निर्भर छैनन् - बरु, त्यहाँ दुई मेट्रिक्स बीच एक अस्थिर सम्बन्ध छ।
चाल के हो भने, यी साना प्रकाशकहरू हुन् प्रति दिन कम्तिमा पुशहरू पठाउन - धेरै केसहरूमा तिनीहरू उच्च सीटीआर प्राप्त गर्न सक्दैनन् किनकि उनीहरूले आफ्ना श्रोताको प्राथमिकताहरूको पर्याप्त समझ लिएका छैनन्। ठूला प्रकाशकहरू यसको विपरित, प्राय: प्रति दिन around० अधिसूचनाहरू पठाउँछन् - र अझै, सान्दर्भिक र आकर्षक रहनुहोस्।
स्पष्ट रूपमा, फ्रिक्वेन्सी महत्व, तर तपाईं pushes को आदर्श दैनिक संख्या निर्धारित गर्न प्रयोग गर्नु पर्छ आफ्नो मिडिया अनुप्रयोग।
फ्याक्टर:: आईओएस बनाम एन्ड्रोइड प्लेटफार्म
के तपाईंले याद गर्नु भएको छ कि iOS भन्दा CTR हरू एन्ड्रोइडमा कसरी उच्च हुन्छन्? यो धेरै जसो प्लेटफर्मको UX बीचको भिन्नताका कारणले हुन्छ।
एन्ड्रोइडमा, पुशहरू प्रयोगकर्तालाई बढी देख्न सकिन्छ: तिनीहरू पर्दाको शीर्षमा चिपके रहन्छन्, र प्रयोगकर्ताले प्रत्येक चोटि उनीहरूलाई सूचना ड्रयर तान्दा देख्दछन्।
आईओएस मा पुशहरू केवल लकस्क्रिनमा मात्र देखिन्छन् - जब उपकरण अनलक हुन्छ, पुशहरू सूचना केन्द्रमा लुकेका हुन्छन्। र नयाँ सुविधाहरू प्रतिबन्धितको साथ आईओएस १ in मा सूचनाहरू, धेरै सतर्कताहरू प्रयोगकर्ताहरूको फोकस बाहिर हुनेछ।
ध्यान दिनुहोस् कि नम्बर पाठकहरूको तपाईं आईओएस र एन्ड्रोइड मा पुश सूचनाहरू संग संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ एक देश देखि अर्को फरक हुनेछ।
बेलायतमा, आईओएस प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिशतले सेप्टेम्बर २०२० मा मात्र एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको साझेदारीलाई पार गर्यो, र अहिले मोबाइल प्लेटफार्मको दर्शकहरु लगभग बराबर छन्।
अमेरिकामा, यद्यपि, आईओएस प्रयोगकर्ताहरूले एन्ड्रोइड उपकरण मालिकहरू भन्दा धेरै संख्यामा स्थिर १%% द्वारा।
यसको मतलव निरपेक्ष संख्यामा, एक मिडिया अनुप्रयोगले अधिक आईओएस प्रयोगकर्ताहरू युकेमा भन्दा युएसमा संलग्न गराउन सक्दछ। विभिन्न देशहरू वा बेन्च मार्किंगमा तपाईंको सment्लग्नता मेट्रिक्सको तुलना गर्दा यसलाई ध्यानमा राख्नुहोस्।
कारक:: अधिग्रहण बनाम सगाई ट्वीक्स
Pushwoosh डाटा CTRs शिखर देखाउँदछ जब मिडिया अनुप्रयोगमा १०-–० के हुन्छ र १००-–०० के ग्राहकहरू छन्।
सुरुमा, प्रयोगकर्ता संलग्नता बढ्छ जब एक समाचार आउटलेटले आफ्नो पहिलो K० के ग्राहकहरू प्राप्त गर्यो। यदि एक मिडिया अनुप्रयोगले श्रोताको विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिरह्यो भने, CTRs स्वाभाविक रूपमा ड्रप हुन्छ।
जहाँसम्म, यदि प्रकाशकले प्रयोगकर्ताको अधिग्रहण भन्दा बढी प्रयोगकर्ता सment्लग्नतालाई प्राथमिकता दिन्छ भने, उनीहरूले आफ्नो उच्च CTR पुन: निर्माण गर्न सक्दछन्। मिडिया अनुप्रयोगले १०० के ग्राहकहरू जम्मा गर्ने बित्तिकै यसले सामान्यतया A / B परीक्षणहरूको एक सूची सञ्चालन गर्दछ र उनीहरूको श्रोताको प्राथमिकताहरू राम्रोसँग सिकेका हुन्छन्। एक प्रकाशकले अब वितरित सूचनाहरूको सान्दर्भिकता र उनीहरूको संलग्नता दरहरू वृद्धि गर्न व्यवहार विभाजन लागू गर्न सक्दछ।
कुन पुश सूचना प्रविधिले तपाईंको पाठकहरूलाई व्यस्त राख्छ?
तपाईले कारकहरूको एक सूची प्राप्त गर्नुभयो जसले १०104 मिडिया अनुप्रयोगको पुश सूचनाहरूको साथ प्रयोगकर्ता संलग्नता बढावा दिएको छ। कुन विधिहरू तपाईंको लागि सब भन्दा प्रभावकारी साबित हुनेछ? प्रयोग र A / B परीक्षण बताउनेछ।
विभाजन र निजीकरण सिद्धान्तहरूमा तपाईंको रणनीतिलाई आधार बनाउनुहोस्। कस्तो प्रकारको सामग्रीले तपाईंको पाठकहरूलाई सब भन्दा संलग्न गर्दछ नोट गर्नुहोस्। दिनको अन्त्यमा, मिडिया अनुप्रयोग मार्केटि inमा पनि पत्रकारिताका आधारभूत कुराहरू काम गर्दछन् - यी सबै कुरा सही दर्शकहरूलाई उचित जानकारी पुर्‍याउने र तिनीहरूलाई व्यस्त राख्नको लागि हो।
Pushwoosh एक क्रस च्यानल मार्केटिंग स्वचालन प्लेटफर्म हो जसले पठाउन अनुमति दिन्छ सूचनाहरू धक्का दिनुहोस् (मोबाइल र ब्राउजर), in-app सन्देशहरू, ईमेलहरू, र मल्टीचनेल घटना ट्रिगर संचार। पुशवुशसँग, विश्वभरि 80,000०,००० भन्दा बढी व्यवसायहरूले उनीहरूको ग्राहक संलग्नता, अवधारण, र आजीवन मूल्य बढावा दिएका छन्।
एक Pushwoosh डेमो प्राप्त गर्नुहोस्
टैग: एन्ड्रोइडइन-अनुप्रयोग सन्देशहरूiOSiOS बनाम एन्ड्रोइडमोबाइल अनुप्रयोगमोबाइल अनुप्रयोग संलग्नतामोबाइल अनुप्रयोग सन्देशमोबाइल अनुप्रयोग पुश सूचनाहरूपुश सूचनासूचना ctr पुश गर्नुहोस्सूचना कारकहरू धकेल्नुहोस्सूचना आवृत्ति धक्कापुश अधिसूचना अप्ट-इन दरहरूसूचना अनुकूलन धक्कासूचना तालिका पुश गर्नुहोस्सूचना विभाजन पुश गर्नुहोस्सूचना गति पश गर्नुहोस्सूचना तथ्या .्कहरू धकेल्नुहोस्सूचना समयमा पुश गर्नुहोस्Pushwoosh